Ukufingqa amapayipi amanzi abandayo kwi: ukuthi benzeni, izizathu ukwakheka, kanjani ukuqeda. Uhlelo ukupholisa owawusemzini womzalwane
Lapho ukufingqa amapayipi amanzi abandayo ukuthi ingabe ngaso sonke isikhathi atshele i plumber abanolwazi ku. Kodwa zikhona izikhathi lapho ukuba bafune usizo lobuchwepheshe akunakwenzeka, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi kungani kukhona lesi simo nendlela yokubhekana naso.
Umswakama ingavela kokubili metal and plastic evele. Izizathu nokukubangela ngokulinganayo removability kungakhathaliseki ipayipi impahla. Ngakho ekuqongeleleni condensate kunomthelela:
abampofu noma cha ukupholisa;
yokujama tsi amanzi;
Uma uqaphela ukufingqa amapayipi amanzi abandayo ukuthi ingabe kudingeka zixazululwe ngokushesha ngemuva. Doesnt ukuxazulula inkinga akuyona nje kungamboza ububi ngenxa yobuhle, kodwa futhi okwaziyo kulimaze ipayipi.
Indlu yangasese umswakama ngokweqile kungenzeka ngenxa eshisa kakhulu futhi umswakama ngokweqile. Ukuze ulungise izinkinga, kubalulekile ukuba ulungise uhlelo ukupholisa, futhi ngemva kokuthatha okugeza, shiya umnyango ivulekele pholisa igumbi.
Esikhathini yokugezela, imbangela evamile "ukukhala" ipayipi is avuzayo amanzi ethangini. Mshini ilula: amanzi njalo kuvuselelwe futhi ayinaso isikhathi ukuxoxa nabo ekamelweni lokushisa. Ngakho, igemfe kuyabanda, imvelo efudumele. Ngenxa yalokho, khulumela umswakama ngokweqile.
Imiphumela condensate akususiwe
Ezindaweni lapho amapayipi ifakiwe, njengoba umthetho, umswakama lenyuke. Kodwa uma la manani lokungetulu kwelizinga ezibucayi, kungenzeka nemiphumela ebuhlungu amaphayiphi, kanye nabantu abaphila.
Ukwakheka isikhunta nangesikhunta. Lapho ukufingqa phezu ipayipi plastic lubonakala ngaso sonke isikhathi, amaconsi amanzi ageleze phansi izindonga, kuwele phansi. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka indawo evumayo sokuthuthukiswa namagciwane abangela izifo, okuyinto okusongelayo ukubukeka isikhunta. I njalo izimo umswakama ukhunta uqala zanda namazwe ayibulale ke kuyoba nzima kakhulu.
Nokucekela phansi impahla. Ukuthintana njalo amanzi kancane kancane yona zonke izinto egumbini. Metal amapayipi nokugqwala ngokushesha, plastic - iphelelwa umthengi yabo izakhiwo. tile Ceramic angagcina ewa, kanye upende putty - aqhephukile.
Izikhukhula. Amaconsi phezu amapayipi musa shabalala ngokwalo. Bavame flow phansi izindonga microcracks ziwe omakhelwane ukuthi kungadala izikhukhula efulethini ngezansi. Ngaphandle kwamanzi ukuqongelela phezu amashubhu angawa phansi futhi umonakalo flooring. Laminate ekugcineni mabhamuza, linoleum futhi ziwohloka kwakhiwa ukhunta.
Ukuze ugweme lokhu, kudingeka sazi ukuthi singaphila kanjani ukususa condensate kusukela abandayo amanzi ipayipi futhi ukulungisa inkinga ngesikhathi.
Sithola imbangela yenkinga
Ngaphambi empini amathonsi amanzi phezu amapayipi, kubalulekile ukuqonda ukuthi kungani kwenzeka. Ukuqeda ukufingqa amapayipi amanzi abandayo, ukuthi benzeni lwemacala, ke kubangelwa isizathu nesenzakalo yayo.
Uma avuzayo, kuthi ebusuku, lapho amanzi eyeka ezihambayo, ungezwa ziconsa ethule. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthola indawo amanzi ukugeleza, uyisuse futhi inkinga ukufingqa eyoxazululwa uqobo.
Uma umswakama iqoqa ku hose kanye ithangi eseduze ke esikhula ezingxenyeni ezithile zesimiso, ngokuqinisekile inkinga ohlelweni ethangini. Ngenxa khona unomphela ngamanzi abandayo kanye ukufingqa Igumbi kuqhathaniswa efudumele. Ngakho-ke kudingekile ukuba ulungise abakhwabanisi.
Lapho zonke izinhlelo abasebenza kahle, amapayipi ukuze, hlola ukupholisa. Enough ukwenza ephepheni kuya ukuzwakalisa emoyeni futhi uma uwela, ehlanzekile ngokushesha. Kaningi kuyenzeka ukuthi omunye izinyathelo kwanele ukuvimbela ngokuphelele le nkinga.
Ehlobo, lapho igumbi ishisa futhi engenayo amashubhu avunyelwe abandayo amanzi condensate yisici ebalulekile. Kulokhu, kuyasiza ukuqeda ngokushesha kakhulu lokushisa umehluko phakathi emoyeni ongaphandle kanye namanzi amapayipi. Can basisize ejenti umswakama-ethakazelisayo.
I amashubhu inkinga wiring
Lapho imbangela amaconsi phezu amapayipi kuyinto ukungasebenzi amapayipi noma ukupholisa abampofu, kuyacaca kunoma ongelutho, yini okufanele uyenze. Kodwa kwenzekani uma umthombo isizathu lobuchwepheshe. Ngokuvamile ezindlini amaphayiphi ashisayo nabandayo alondoloze nemithombo yamanzi labetibambile iseduzane ngokweqile komunye nomunye. Ezimweni ezinjalo, kuyacaca ukuthi kungani kukhona ukufingqa phezu amapayipi ngokuphindaphindiwe, naphezu hood ezinhle futhi isimo ngokubhujiswa kwazo zonke izinhlangano.
Uma wiring ukwinkundla yomphakathi, qiniseka ukuba banakekele ukwahlukanisa. Kodwa endabeni lapho inethiwekhi kufihliwe, uzodinga usizo lochwepheshe ukuthi kuyoyixazulula geometry wiring. Kunoma yikuphi, isidingo ukulungiswa ayisisekelo.
impahla nangokuvikela usetshenziswa njengesibonelo ekhethekile ngibenze izinto zitholakala kalula. Ifanele lukathayela ezivamile amagwebu. Kulokhu, lo corrugation inqanyulwa ubukhulu ezidingekayo futhi zigqokwe izindawo inkinga. Lapho kukhona khona izikhala ezingenalutho, ukhulula Foam.
Uma "ukukhala" tubing plastic
Lapho amapayipi sibekwa isakhiwo kwe-polypropylene, umbuzo kanjani ukulahla condensate isixazululekile kanje:
Kungcono esikhundleni hood ezivamile, esakhelwe fan.
Bamba ukwahlukanisa izinyathelo usebenzisa amashubhu obukhethekile imbobo. Abakwazi kalula ithengwe ngasiphi esitolo hardware noma sanitary. Lezi amashubhu aqukethe polyethylene Energoflex futhi bavikele ngempumelelo tube. isimo eyinhloko isicelo sabo, ukulungiselela kahle kusengaphambili we amapayipi kangangokuthi wawusomile.
Endabeni ipotimende plastic kungaba ngokuyinhloko ukuxazulula inkinga "ukukhala" lapho aphathe primer lelivakalako. Ngemva ukuqina ephelele bona kungenziwa zaveza ngamafutha ngopende. Le ndlela kufanelekile uma ikamelo i esingokwemvelo, unomphela futhi ebukhali lokushisa iconsi.
Qaphela ukuthi ukubanda kwamanzi ipayipi ovunyelwe ukumboza iyiphi eyigugu futhi zaveza ashisayo uhlelo amanzi uwoyela upende kuphela.
Ukususa umswakama phezu kwensimbi amapayipi
Inkinga nge-acute metal izinhlelo hhayi ngaphansi ngoba umswakama ngokweqile kusongela ukwandisa yakha ukugqwala futhi ukugqoka amapayipi egcwele. Ngakho-ke, uma kwakukhona ukufingqa amapayipi amanzi abandayo ukuthi wenze ukuchaza ngokuningiliziwe ku:
Imibhobho esemzimbeni bahlanza of nokugqwala, omisiwe ngokugcwele futhi camera nge upende uwoyela.
Carbolate into pasty ziphathwe Slots ezahlukene phansi futhi izindonga. Ngemva ukuqina ephelele ibuye embozwe uwoyela upende.
Zonke umugqa amanzi kwelivi-baphathwe primer bese camera nge koqweqwe lwawo.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ngokuvamile inkinga ukufingqa isixazululekile nzima, ngakho-ke kungcono ukuthi luvimbele ivela khona kuka ukubhekana nemiphumela.
Amathiphu amapayipi ukuvimbela ukuvuza
Ochwepheshe babhekana "ukukhala" amapayipi umzuzile eziningi nakho ukuvimbela inkinga ihlumela.
Kuyadingeka ukuba ukuthenga "Gofroterm" amapayipi esitolo. Ingqikithi lisetshenzisiwe bonke ubuso amapayipi, okuholela nsuku isixwayiso ekuqongeleleni eyizingqabavu futhi nezimo umswakama.
nomphumela omuhle futhi kuletha ukwahlukanisa ketshezi. It lisetshenziswa ipayipi wawusomile iphinde ivimbele okungazelelwe lokushisa izinguquko ezibangela kumiswa ukufingqa.
Lapho umehluko omkhulu phakathi izinga lokushisa emoyeni kanye emanzini okuphakelayo kuyadingeka ukuze vimbela amaphayiphi. Indaba ngempumelelo kakhulu futhi efanelekayo le njongo kuyinto Foam polyethylene, okuyinto okuthengiswa yisiphi isitolo hardware ngenani lentengo elikahle. impahla okungaguquki nge ngocingo kanye wire ezivamile.
Ukuphungula fogging tingafundziswa izindlela, kodwa lokho indlela oyikhethayo, kudingeka unqume ukuthi lapho ncamashi ecacisiwe izizathu.
ipayipi Wet endlini yangasese
Ukufingqa ku amapayipi e indlu yangasese ikakhulu kwakhiwa ngenxa ukupholisa enganele. Ngakho-ke, uma indlu kuphela at the stage of ukwakhiwa, kufanele ngokushesha ubone draw eqinile. Ngaphambi obandayo kubalulekile vimbela ipayipi. Ikakhulukazi kufanele sinake lokhu, uma okuwukuphela kwepayipi lamanzi ashisayo nabandayo zitholakala eduze ngokushesha.
Ukuntuleka kokukhulumisana uhlelo of ukupholisa owawusemzini womzalwane kuyinto evamile imbangela ukufingqa. Ngakho-ke, ukuze sigweme izinkinga nale isici, kubalulekile ukuba banake lokhu.
Ukuze ukuhlola kuhileleke ochwepheshe abaqhuba uhlanzekile uma kunesidingo. Uma le nkinga inga- ixazululwe kuyodingeka ufake esinye isiteshi ngoba qeda. Uhlelo ukupholisa owawusemzini womzalwane kungaba ngokuvamile lokhu ngaphandle umonakalo omkhulu kakhulu futhi eqolo.
Izinto zokuvala umoya amapayipi
Zonke amapayipi endlini kuyinto ukushisa namakhaza kangcono. Ngenxa yale njongo, izinto ezikhethekile ithengwe. Kodwa ungasebenzisa izindlela ngakwesokunene futhi ukuhlukana endlini amapayipi njalo ezimanzi.
Ejwayelekile tube epulasitiki usike lengthwise futhi agqoke izindawo inkinga. Isikhala phakathi amashubhu ligcwele Foam.
Metal ipayipi uvikelekile kalula zidwedwe ubudala. Ukuqeda lokhu nokugqwala, iphele tube kanye nezindwangu zamatyvaem.
Indlela seal amafasitela ebusika: ukuqeda okusalungiswa ngokushesha, elishibhile futhi ngaphandle umonakalo Uhlaka
Indlela ukukhetha isihloko phansi ngoba ekhishini: izici, izinhlobo nemibono ezithakazelisayo
Indlela unamathelise ufa in odongeni, ngakho njengoba ukungacabangi ukuthi ukhona?
Linoleum "Tarkett". Ukucaciswa. kuvuleke
Balusters ezenziwe metal: izinzuzo kanye ukufakwa izincomo
Quality nokufakwa amawindi plastic - isihluthulelo umsebenzi kuphumelele!
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi ekwelapheni endometritis
Yiziphi umehluko phakathi izinguqulo-Windows 7
Izazi zokusebenza kwengqondo ezidumile eziningi zomhlaba
Hamba uyothenga. Indlela ukukhetha buggies?
Amafilimu ahlobene ukuze "Ungakwesokudla": Uhlu
Hexanchus: kwendawo ukubukeka, ingozi ngoba indoda
Bhaka inkukhu kuhhavini? Ayikho inkinga!
Delta - imisipha, ezidinga ukuqeqeshwa okukhethekile
Ikamu okuzenzakalelayo Fast Izinwele straightener: Izibuyekezo
Yini sayizi selilonke Zomhlaba
I-Novorossiysk, i-Myskhako settlement - ihlale egu lolwandle olumnyama
Ziyini izinkulumo eziphiko? Izinkulumo ze-Latin ezinamaphiko